Wasiirka Caddaaladda oo Tababar U Soo Xiray 17 Xeer-ilaaliye | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Wasiirka Caddaaladda oo Tababar U Soo Xiray 17 Xeer-ilaaliye
Wasiirka Caddaaladda oo Tababar U Soo Xiray 17 Xeer-ilaaliye
Muqdisho (XT): Munaasabad tababar 6 bilood socday loogu soo xirayey 17 Xeer Ilaaliye, ayna goobjoog ka ahaayeen Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda, Janaraal C/laahi Axmed Jaamac (Ilka-Jiir), Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, Ku Xigeennada Xeer Ilaaliyaha, Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, Gudoomiyaha Maxkamadda Racfaanka, Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Caddaaladda, qaybaha kala duwan ee Bulshada Radyidka iyo Ururrada Haweenka ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee Wasaaradda Caddaaladda.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir, ayaa sheegay in Xeer Ilaaliyayaasha tababarka loo soo xiray ay yihiin wiilal iyo gabdho dhalinyaro ah kuwaas oo dal iyo dibad wax ku bartay, laguna barbaariyay diinta Islaamka. Shaqaalahan ruqsadda loo siiyay in ay si buuxda uga shaqeeyaan Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa tababar xoogan la siinayey 6dii bilood ee la soo dhaafay. Dr Axmed ayaa ku baraarujiyay dhalinyarada tababarkan usoo dhamaaday inay dagaal ba’an ku qaadaan musuq-maasuqa baahsan ee dalka ka jira.
“Waajibaad aad u fara badan ayaa maanta meeshan ka dhalanaya. Caqabado badan ayaa idinka hor imaan doona. Waajibka koowaad waa inaad la dagaallantaan musuqmaasuqa. Hadii waagii hore Xeer Ilaalinta ay ku marmarsiyoon jirtay shaqaale nagu filan ma heysanno, maanta xafiiskan waxa uu leeyahay 28 Xeer Ilaaliye marka lagu daro aniga iyo Ku Xigeennadayda.” Ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Dr Axmed Cali Daahir ayaa muujiyay in haatan Xafiiska Xeer Ilaalinta ay joogaan shaqaale ku filan tiro iyo tayo ahaan isaga oo carrabka ku adkeeyay in shaqaalaha ay haatan haystaan ay qaadi karaan masuuliyadda loo igmaday. “Haadii aan shaqadeenna qabsan weyno maanta wixii ka dambeeya masuuliyadda iyo eedda annaga ayay na fuuleysaa” Ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
Wasiirka Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya , Janaraal Cabdulaahi Axmed Jaamac (Ilka-Jiir) ayaa u mahadceliyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka isbadalka uu la yimid ee dhinacyada dayactirka iyo dhismaha Xeer Ilaalinta, kordhinta shaqaalaha iyo kobcinta tayada shaqaalaha hore usii joogay Xafiiska Xeer Ilaalinta.
Wasiirka ayaa yiri “waxaan idiin dardaarmayaa inaad dadka cadaalad ugu garsoontaan oo aad ku maamushaan. Maxkamadaha, Xeer Ilaalinta iyo hay’adaha garsoorka dadku waa duraan. Isha Allaah waxaan rajeynayaa in degdeg wax looga qabto inkasta oo aan isleeyahay waa laga bad-badiyaa, waase jiri karaan garsoorayaal gacanta hoorsada. “
Janaraal Ilka Jiir ayaa sheegay in hadii cadaalad la waayo aysan jiri karin nabad gelyo, hadii nabadgelyo la waayana aanu dalka horumari karin oo burbur iyo dhibaato aan laga bixi karin. Si dalkan loo samata-bixiyo ayuu Wasiirka tilmaamay in ay aad muhiim u tahay in la helo nidaam garsoor oo hufan . Wuxuu shacabka Soomaaliyeed ku boorriyay in aan Maxkamadaha iyo Xeer Ilaalinta kaliya laga sugin in ay cadaalad ku shaqeeyaan ee waa in shacabka oo idil ka qeyb qaadato hagaajinta nidamaka garsoorka dalka.
“Ku dadaala inaad cadaalad ku shaqeysaan, eex inaad ka fogaataan, qabyaalad aad ka dheerataan iyo in aad ilaahay ka baqdaan. Qof walbow marka hore naftaada badbaadi oo ka bilow. Wixii aad tababarkan ka barateen waa inaad ku shaqeysaan oo ku camal fashaan. Waxaan ku raja weynahay inaad wax muuqdo kusoo kordhin doontaan Garsoorka iyo Xeer Ilaalinta.” Ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray Jan. C/laahi Axmed Jaamac (Ilka-jiir).
Wasiirka ayaa kula dardaarmay Xeer Ilaaliyayaasha cusub oo 35% dumar ah inay waajibaadkooda u gutaan si daacanimo iyo Alle ka cabsi ku jirto isaga oo ku fogaaday dhibaatooyinka aakharo iyo aduun ee laga dhaxlo cadaalad darrada lagu shaqeeyo.
Previous articleMadaxweynaha oo Arrimaha Qaxootiga Soomaalida ee Yemen Kala Hadley Danjiraha Britain
Next articleMadaxweynaha oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya